Fahalalana tsy izy mampidi-doza
"Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao, ka mialà amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoherana avy amin'izay atao hoe fahalalana, kanjo tsy izy."- 1 Tim. 6:20.
Nisy ireo nampiely hevi-diso momba an'Andriamanitra tao New Hampshire. Naseho ahy fa manao tsinontsinona ny fahamarinana ireo lehilahy ireo tamin'ny hevitra notoriny izay nitarika ho amin'ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana. Naseho ahy fa manintona fanahy maro ireo lehilahy ireo amin'ny fanehoana tsangan-kevitra tsy mitombina momba an'Andriamanitra.(...)
Ankoatra izany dia nambaran'izy ireo fa tsy manota intsony ireo izay efa nohamasinina, ary nasehony toy ny sakafo avy ao amin'ny filazantsara izany fiheverana izany. Loza ho azy ireo sy ny hafa no naterak'ireny tsangan-kevitra diso sy ny hery mahataona mamitaka ireny. Nandresy ireo izay tsy nahita ny faharatsian'ny tsangan-kevitry ny fiantsoana avelo izay natao tsara afina izy ireo. Faharatsiana lehibe no efa naterak'izany. Ny fampianarana milaza ny olon-drehetra ho masina dia nitarika ho amin'ny finoana fa tsy hahavery azy ireo ny zavatra ankamamiany. Ny vokatr'izany finoana izany no fahatanterahan'ny fanirian-dratsin'ny fo, izay nambara fa nohamasinina, kanefa lavitry ny fahadiovan'ny fisainana sy ny fomba fanao.
Iray amin'ireo toe-javatra nasaina nananarako ireo nanao fampianarana mikasika ny andriamanitra iray tsy manana ny maha-izy azy izay hita manerana ny zavaboary izany, ary koa ny fampianarana mikasika ny fahamasinan'ny nofo.
Hosandohan'ny fampianaran'olombelona ny fahamarinana amin'ny farany. Haseho ho toy ny fampianarana azo antoka ny tsangan-kevitra feno fitaka. Iray amin'ireo fitaovana nampiasain'i Satana tany an-danitra ary mbola ampiasainy ankehitriny ny fahalalana diso.(...)
Miangavy ireo miasa ho an'Andriamanitra aho mba tsy handray ny sandoka ho toy izay tena izy. Manana ny Baiboly mirakitra ny fahamarinana sarobidy indrindra isika, ka tsy ilaintsika ny tombantombana sy ny fientanentanana sandoka. Ao amin'ny lovia volamena fandoroana ditin-kazo manitra, tahaka izay nasehon'ny fampianaran'i Kristy, no misy izay manameloka sy manova ireo fanahy maro. Asehoy amin'ny fahatsoran'i Kristy ireo fahamarinana izay nahatongavany sy notoriny tety amin'izao tontolo izao, amin'izany no hahatsapana ny herin'ny hafatra entinao. Aoka ianao tsy hitory fampianarana na fizahan-toetra izay tsy miorina amin'ny Baiboly.-Ev, tt. 600, 601